चेन्नाईसंग आश्विन खेल्ने अनिश्चित, प्रशिक्षक कैफले बताए आश्विनको स्थान कसले लिनेछन् – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ आश्विन ८, बिहीबार १८:४३
बायाँतर्फको काधको चोटको कारण घाइते भएका दिल्ली क्यापीटल्सका प्रमुख भारतीय अफ-स्पिनर रभीचन्द्रन आश्विन चेन्नाई बिरुद्ध शुक्रबार हुने दोश्रो खेल खेल्ने नखेल्ने अझै अनिश्चित रहेको छ। उनि किंग्स-११ पन्जाबसंग लिगको पहिलो खेलमा घाइते भएका थिए।
“आश्विनले आज अभ्यास गर्नेछन्। भोलिको खेलमा उनि उपलब्ध हुनेछन् या छैनन् अहिलेसम्म तय गरेका छैनौँ। उनको अभ्यास कस्तो रहनेछ त्यसपछि कुनै निर्णयमा पुग्नेछौँ। उनको हामि नजिकबाट निगरानी गर्नेछौँ।” दिल्लीका सहायक प्रशिक्षक तथा पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफले जानकारी गराए।
कैफले आश्विन नखेलेको खण्डमा टिमका अर्का अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्राले उनको स्थान लिने बताएका छन् – “यदी आश्विन भोलि खेल्न नसक्ने भए हामिसंग निकै अनुभवी अमित मिश्रा रहेका छन्। उनि आईपीएलमा राम्रो गरिरहेका छन्। राम्रो कुरा यो हो कि हामिसंग टिममा प्रतिस्थापनको लागि खेलाडी तयार छ।” कैफले बिहिबार भिडीयो प्रेस कन्फरेन्समा बताए।
पन्जाब बिरुद्ध १ ओभर बलिंग गर्ने क्रममा २ विकेट लिएका आश्विन म्याक्सवेलले हिर्काएको सटलाई रोक्न हामफालेका थिए जुन क्रममा बायाँ काधमा चोट लागेको थियो। असहज तरिकाले ल्याण्ड हुँदा उनि पिंडामा देखिएका थिए। त्यसपछि उनि टिम फिजियो प्याट्रिक फरहार्टसंग मैदान बाहिरिएका थिए। ३४ वर्षीय आश्विनले सोमबार ट्वीटरमार्फत आफ्नो अवस्था सुधारउन्मुख रहेको बताएका थिए – “म दुखाइमा थिए हिजो राति मैदान छोड्दा, तर अहिले दुखाइ शान्त भएको छ र मेरो स्क्यान रिपोर्ट पनि उत्साहजनक आएको छ। तपाईहरुको माया र साथको लागि धन्यवाद।”
चेन्नाई बिरुद्ध सन्दिप खेल्ने सम्भावना कति ?
दिल्लीले पहिलो खेलमा स्पिनरको रुपमा आश्विन र देब्रे हाते स्पिनर अक्षर पटेललाई मौका दिएको थियो। विदेशी खेलाडीको रुपमा मार्कस स्टोइनिस, शिमरन हेटमायर, कागीसो रबाडा र एनरिक नोर्कियालाई टिमले मौका दिएको थियो। सोहि मैदानमा खेल हुने हुँदा टिमले ३ जना फास्ट बलर लिएर खेल्ने सम्भावना प्रवल छ। हेटमायर, स्टोइनिस र रबाडाको स्थान टिममा पक्का हुँदा फास्ट बलरको रुपमा अर्को विदेशी खेलाडी खेलेको खण्डमा नेपाली स्पिनर सन्दिप लामिछाने खेल्ने सम्भावना रहंदैन। किनकि टिमले अन्तिम-११ मा ४ जना मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउछ। ढाडको समस्याले पहिलो खेल गुमाएका भारतीय पेस बलर इशान्त शर्माले कम्ब्याक गरेको खण्डमा भने विदेशी फास्ट बलरको स्थान सन्दिपले लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। इशान्त खेले पहिलो खेल खेलेका नोर्किया बाहिरन सक्नेछन् जसको स्थान सन्दिपले लिन सक्छन्। इशान्त खेल्ने न खेल्ने अझै तय भएको छैन।
घाइते खेलाडीको सूची बढ्दै , कारण के ?
सहायक प्रशिक्षक कैफले लिग युएईमा भइरहेको कारणले बालुवाको आधार भएको मैदान हुँदा खेलाडीहरु घाइते हुने क्रम बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“Soft tissue injuries धेरै देखिनेछन् किनकि धेरै पछि खेलाडीहरुले पुनरागमन गरिरहेका छन्। उनीहरु मैदानमा आफ्नो उत्कृस्ट दिईरहेका छन् तर बालुवाको आधार भएको मैदान हुनाले सजिलो छैन। हामि यस्तोमा खेल्न हाम्रो शरीर अभ्यस्त छैन।”
“दुबईको ठूलो मैदानमा खेलाडीहरु धेरै दौडनु पर्छ जुन अभ्याससंग मिल्दो हुँदैन। अभ्यासमा ब्याटिंग, बलिंग र थोरै फिल्डिंग गरिन्छ। तर खेलको दौरान जोश फरक हुन्छ त्यसैले मलाई लाग्छ खेलाडीहरुलाई यो सिजन मुस्किल हुनेछ।”
दिल्लीका सहायक प्रशिक्षक मोहम्मद कैफ
आश्विन बाहेक मुम्बईका नाथन कौल्टर नाइल, बैंगलोरका क्रिस मोरिसलाई खेल अघिनै साइड स्ट्रेन इन्जुरी देखिएको छ। यस्तै हैदरावादका केन विलियमसनलाई पनि अभ्यासको दौरान मांसपेशीमा समस्या आएको थियो भने उनका टिमका सदस्य मिचेल मार्श प्रतियोगिताबाट एंकल इन्जुरीका कारण बाहिरीका छन्। चेन्नाईका अम्बाती रायडु ह्याम्सट्रिन्ग इन्जुरीले पिडित छन्। चेन्नाईकै ड्वेन ब्राभो पनि घुडाको चोटका कारण खेल्न सकेका छैनन्। दिल्लीमै आश्विन बाहेक फास्ट बलर इशान्त शर्मा ढाडको समस्याका कारण पहिलो खेल खेल्न सकेका थिएनन्।
इशान्त खेल्ने सम्भावना बारे कैफले बताए – “उनले हिजो मैदानमा अभ्यास गरेका थिए र राम्रो दौड लगाएका थिए। उनले बलिंग भने गरेनन्। उनि निगरानीमा रहेका छन्। चेन्नाईसंग खेल्ने बारे हामि बिहिबारको अभ्यास पछि मात्र भन्न सक्नेछौँ।” कैफले बताए।
कैफका अनुसार लामो समय पछि क्रिकेटरहरु मैदान फर्केको हुँदा निकै होसियार हुनु पर्नेछ – “दुबई र अबुधाबी ठूलो मैदान छ जहाँ धेरै दौडनु पर्छ त्यसैले खेलाडीहरुले होस गर्नुपर्छ। ठूलो मैदानमा फिल्डिंग गर्दा एन्कलमा चोट लाग्ने सम्भावना रहन्छ।”
“अन्तिम १० दिनमा दुबईको मौसम परिवर्तन भएको छ। ६-७ बजे बेलुका मैदानमा धेरै सित हुन्छ। दुबईमा भने सित धेरै छैन। हामीले अभ्यास गर्ने आईसीसी एकेडेमी खुला ठाउँमा हुँदा धेरै सित हुन्छ त्यसैले फिल्डिंग अभ्यास गर्न मुस्किल हुन्छ। बल भिजेर भारि हुन्छ जसले खेलाडीलाई मुस्किल हुन्छ। त्यसैले अभ्यास दौरान खेलाडी घाइते नहुन् भनेर हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। फिल्डिंग त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ आराम पछि राम्रो गर्न समय चाहिन्छ।” कैफले बताए